Manavao tanteraka ny fampiharana azy ho an'ny Apple TV i YouTube, na dia mitovy aza izy io | Avy amin'ny mac aho
Ny sehatra video YouTube dia nanjary fihaonan'ny mpampiasa an-tapitrisany maro isan'andro tamin'ny alàlan'ny fitaovany. Miaraka amin'ny fisian'ny fahitalavitra marani-tsaina sy boaty avo lenta, mankafiza YouTube amin'ny efijery lehibe nanjary zavatra niainana mahafinaritra io.
Na izany aza, ny fampiharana YouTube ho an'ny Apple TV dia namela be foana ny faniriana, ary toa tsy namaha io traikefa io ilay fanavaozana vaovao voarain'ilay fangatahana, fa vao mainka niharatsy azy, zavatra iray izay tena sarotra tratrarina, saingy fantatray fa rehefa manolotra zavatra ny Google dia amin'ny farany dia mahomby.
Ireo mpandraharaha miloka hatramin'ny voalohany mba hampifanaraka ny fampiharana na ny lalao afaka nanararaotra ireo tombony natolotry ny tvOS, saingy toa tsy tsikaritr'i Google na izy ireo, tsy te-hahatsikaritra na aleony mankeny amin'ny baolin'izy ireo. Tsy toa ny nataon'ny serivisy horonantsary hafa tamin'ny fampifanarahana ny Apple TV, ny YouTube kosa tsy nanao ny mifanohitra amin'izay, satria toa nampifanarahin'izy ireo ny endrik'ilay kinova ho an'ny fitaovana hafa amin'ny Apple TV, nefa tsy nanararaotra ny fanatsarana na ny fiasa napetraky ny tvOS. fanariana antsika.
Ho fanampin'izany, mitarika fifanjevoana ilay rindranasa, satria mampahafantatra ireo horonan-tsary rehetra misy amin'ny kalitao 4k misy marika, fa araka ny nitateranay volana vitsivitsy lasa izay dia avy any Mac aho, tsy afaka milalao horonantsary 1080 fotsiny ny sehatra amin'ity fitaovana ity, noho izany tsy misy dikany fa ity karazana atiny ity dia misy amin'ny alàlan'ny Apple TV rehefa tsy ho azo averina hamboarina intsony amin'ny vahaolana voalohany. Ahoana raha mamela antsika ny fampiharana ary tsy manome olana mifanentana amin'ny Apple TV isika, dia ny manova ny tahan'ny fefy eo anelanelan'ny 24, 30 ary 60 fps. Hita ao amin'ny App Store izao fanavaozana vaovao izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Manavao tanteraka ny fampiharana azy ho an'ny Apple TV i YouTube, na dia mitovy aza izany